dhiri: minecraft nyaya modhi episode 1 yave yemahara pa Android uye ios
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Minecraft Nhau Mode Chikamu Chikamu 1 ikozvino chave chemahara paApple uye iOS
Deal: Minecraft Nhau Mode Chikamu Chikamu 1 ikozvino chave chemahara paApple uye iOS
Iyo yakanaka Minecraft mutambo wakagadzirwa nevanhu veTelltale ikozvino yave kuwanikwa yemahara pane ese ari maviri Android uye iOS mapuratifomu. Zvakanaka, hazvo chikamu chekutanga chakasununguka, asi izvo zvinofanirwa kunge zvakakwanira kukupa zano kana zvichikodzera kutenga zvimwe zvikamu zvacho kana kwete.
Kusiyana Minecraft: Pocket Edition , Telltale & apos; s Minecraft: Nhau yeModhi chiitiko chinonakidza chinotambanudza zvitsauko zvisere. Vatambi vanotanga rwendo runotyisa kuyambuka Nyika yepasi, kuburikidza neNether, kusvika kumagumo, uye nekupfuura, senhengo dzeiyo inozivikanwa Order yeDombo.
Mutambo uyu unosanganisira makirasi akati wandei seWarrior, Redstone Injiniya, Griefer, uye Aratidziro, imwe neimwe iine hunyanzvi nemasimba ayo achakubatsira iwe kukunda zvikara zvinotyisa.
Pamusoro pezvo, Telltale akahaya mamwe manzwi akanyanya muindasitiri yevaraidzo kuti ape hupenyu kune vamwe vatambi vari mumutambo: Patton Oswalt (Ratatouille, Agents eSHIELD), Brian Posehn (Iyo Sarah Silverman Chirongwa, Mission Chikomo), Ashley Johnson (Wokupedzisira Kwedu, Ngano kubva kumaBorderlands), Dave Fennoy (Kufamba Vakafa: A Telltale Mitambo Series, Batman: Arkham Knight) uye nezvimwe.
Ramba uchifunga kuti nepo chikamu chekutanga chiri chemahara, zvimwe zvese zvinofanirwa kutengwa mu-mutambo we $ 4.99 imwe neimwe. Nekudaro, kana iwe uchida iyo yekutanga episode uye woona kuti mutambo wakakodzera nguva yako, unogona kubhadhara $ 25 bundle iyo inosanganisira ese episode.
Chipo chazvino chingangotarisirwa kune avo & ampos; vasina kumbobvira vatamba Minecraft kare vasati vari muchiitiko ichi, asi ndeipi nzira iri nani yekugadzirisa iko kukanganisa nekutora mukana wepachena.
Minecraft Nhau Mode
mabviro: App Store / Google Play
iphone 6 s pamwe nemavara
Java nhamba yekubvisa kubva patambo
Google Mepu yeIOS uye Android ikozvino inopa nyowani yekuenda kwakawanda